Mogadishu Journal » Croatia iyo Kabtan Modric oo hardan adag kadib iska xaadiriyay wareegga Sideeda
Croatia iyo Kabtan Modric oo hardan adag kadib iska xaadiriyay wareegga Sideeda
Ciyaartan oo qaybteedi hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah ayaa markii la isku soo laabtay labada xulba aysan usuurta galin midkoodna uu shabaqa gaaro.
Taas qasab kadhigtay in ciyaarta lagu daro 30-daqiiqo o dheeri ah si midkood uu ugu biiro kooxaha iska xaadiriyay wareegga 8-da.
Wallow ay labada xulba abuureen fursado gool noqon karay balse si lamid ah qaybtii danbe ee ciyaarta wax gool ah la iskama dhalin ciyaarta ayaana kuoo idlaatay barabaro.
Markanna waxaa la isla aaday rigoorooyin ama gool kulaadyo taas oo ay xidigaha wadanka Croatia ay ku adkaadeen kadib 5-riigooro oo ay tuurteen ay dhaliyeen seddex kamid ah halka Denmark 5-rigooro oo ay tuurteen ay kaliya dhaliyeen 2 kamid ah taas oo kadhigan in ay Croatia ku awood roonaatay 3-2 .
Iyaga oona wareegga xiga iska xaadiriyay kuna biiray wadamadii halkaa mar hore isgeeyay.
Spain oo noqotay xulkii Saddexaad ee ku hara wareegga 16-ka koobka adduunka kadib….
Qaramada Midoobey oo shaacisay tirada dadka ku barakacay colaada Tuka Raq